Fiarahabana avy amin’i Mgr Désiré Tsarahazana, filohan’ny FEM – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Mirary Noely feno fiadanana ho antsika
Fanolorana ny andro – janoary 2017
Fiarahabana avy amin’i Mgr Désiré Tsarahazana, filohan’ny FEM
Loharano : Lakroan’i Madagasikara
Andriamanitra mihitsy no tonga miara-monina amintsika. Olona mitovy amintsika, iray petsapetsa amintsika. Fitiavana tapitr’ohatra
izany ary fanetren-tena tonga lafatra satria tsy hita tsirihina ny halalin’ny Famindrampony.
Ho an’ny olombelona rehetra tsy ankanavaka no nahatongavan’ilay Mesia. Ary na dia avo fipetraka aza Andriamanitra dia iva fijery araka ny fomba fitenintsika. Koa mifalia ary amin’izany fitiavany izany isika.